Thyroid Cancer (သိုင်းရွိုက်ကင်ဆာ ) - Page 12 of 26 - Hello Sayarwon
Thyroid Cancer (သိုင်းရွိုက်ကင်ဆာ )
Dr.Nyan Linn မှ ရေးသားသည်။ 16/02/2022 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
Thyroid Cancer (သိုင်းရွိုက်ကင်ဆာ ) ကဘာလဲ။
သိုင်းရွိုက်ကင်ဆာဆိုသည်မှာ ခန္ဓါကိုယ်ရှိသိုင်းရွိုက်အကျိတ်တွင် ပုံမှန်မဟုတ်သော ဆဲလ်များကြီးထွားများပြားလာခြင်းကိုဆိုလိုသည်။
သိုင်းရွိုက်အကျိတ်သည် လိပ်ပြာပုံစံကဲ့သို့ဖြစ်ပြီး လည်ပင်း၏အရှေ့ပိုင်းတွင် တည်ရှိသည်။
ထိုသိုင်းရွိုက်မှ သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းကို ထုတ်လုပ်သည်။ ထိုဟော်မုန်းမှ တဆင့် ခန္ဓါကိုယ်ရှိ ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်များ၊သွေးပေါင်ချိန်များ၊နှလုံးခုန်နှုန်း၊ကိုယ်အပူချိန်၊နှင့် အလေးချိန်တို့ကို ထိန်းညှိပေးသည်။ ထိုသိုင်းရွိုက်ကင်ဆာသည် အဖြစ်နည်းသော်လည်း ဟော်မုန်းနှင့်ပတ်သတ်သည့် ကင်ဆာများတွင် အဖြစ်များဆုံးကင်ဆာဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။(ဟော်မုန်းစနစ်သည် ကိုယ်တွင်း ရှိ လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ထိန်းညှိပေးသည့် ဟော်မုန်းများကို ထုတ်လုပ်သည်)ထိုကင်ဆာရှိသော သူအများစုတွင် ကုသမှုများသည်အောင်မြင်သည့်အပြင် စောစီးစွာ ရောဂါအားတွေ့ရှိရလေ့ရှိသည်။ သို့သော် ကံမကောင်းသောအားဖြင့် ကုသပြီးနှစ်များအကြာတွင် ထိုကင်ဆာသည် ပြန်လည်ဖြစ်ပွားတတ်ပါသည်။
Thyroid Cancer (သိုင်းရွိုက်ကင်ဆာ ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
Thyroid Cancer (သိုင်းရွိုက်ကင်ဆာ ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
သိုင်းရွိုက်ကင်ဆာ ရဲ့ အဖြစ်အများဆုံးရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့ –
ရောဂါကနဦးအစတွင် လက္ခဏာမပြပါ။ သိုင်းရွိုက်အကျိတ်သည် ပုံမှန်ရောဂါမရှိပဲကောင်းမွန်နေသောအခါ စမ်း၍မရပါ။ သိုင်းရွိုက်ကင်ဆာသည် ပိုဆိုးလာသောအခါ အောက်ပါလက္ခဏာများကို ပြတတ်သည်။
လည်ပင်းနှင့် လည်ချောင်းတွင် နာကျင်ခြင်း
လည်ပင်းရှိ ပြန်ရည်ကြောအိမ်များ ရောင်ရမ်းခြင်း
Thyroid Cancer (သိုင်းရွိုက်ကင်ဆာ ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအနေဖြင့်လည်း မည်သည့်အရာမှ သိုင်းရွိုက်ကင်ဆာဖြစ်စေမှန်းမသိကြချေ။ သို့သော် အခြားသောကင်ဆာများကဲ့သို့မိမိ၏ဆဲလ်များအတွင်းရှိ မျိုးရိုးဗီဇများ၏ ပြောင်းလဲမှုများကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်ဟု ယုံကြည်ရသည်။ ထို မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းလဲမှုများသည် မိဘဆီမှ မျိုးရိုးလိုက်ခြင်း (သို့) အသက်အရွယ်ကြီးရင့်လာသောအခါမှ မိမိတွင် အလိုလိုဖြစ်ပွားလာခြင်း တို့ကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။
အဖြစ်အများဆုံးသော သိုင်းရွုက်ကင်ဆာအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းအား ထုတ်လုပ်၍ သိုလှောင်ပေးသော ဖော်လီကူလာဆဲလ်လေးများမှ ဖြစ်ပွားသည်။
Thyroid Cancer (သိုင်းရွိုက်ကင်ဆာ ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
သိုင်းရွိုက်ကင်ဆာ ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်
အမျိုးသမီးဖြစ်ခြင်း – အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက်ဖြစ်ပွားနိုင်ချေမြင့်သည်။
ဓါတ်ရောင်ခြည်များထိခြင်း – အထူးသဖြင့် ခေါင်းနှင့် လည်ပင်းရှိ ဓါတ်ရောင်ခြည်ကုသမှုများလည်းကောင်း နျူကလီးယားဓါတ်ပေါင်းဖိုအတွင်း မတော်တဆမှုများ(သို့) လက်နက်စမ်းသပ်ခြင်းများတွင် လည်းကောင်းဖြစ်ပွားတတ်သည်။
အချို့သောမျိုးရိုးဗီဇနှင့်ပတ်သတ်သော ရောဂါများ- သိုင်းရွိုက်ကင်ဆာဖြစ်ပွားနိုင်ချေမြင့်သည့် မျိုးရိုးလိုက်သည့်ရောဂါများမှာ မယ်ဒလာရီသိုင်းရွိုက်ကင်ဆာ ၊ multiple endocrine neoplasia and familial adenomatous polyposisတို့ဖြစ်ကြသည်။
Thyroid Cancer (သိုင်းရွိုက်ကင်ဆာ ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
သိုင်းရွိုက်ကင်ဆာအား ကြည့်ရှူထိတွေ့စမ်းသပ်ခြင်း (သို့) ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးခြင်းများဖြင့် အတည်ပြုသိရှိနိုင်ပါသည်။ လည်ပင်းအား ကြည့်ရှူစမ်းသပ်ပါက သိုင်းရွိုက်အကျိတ်နေရာတွင် သေးငယ်သော (သို့) ကြီးမားသော အလုံးတစ်လုံးကို မြင်တွေ့ရတတ်သည်။ ပြန်ရည်ကြောအိမ်များ (သို့) အကျိတ်များသည်လည်း ကြီးမားနေနိုင်သည်။
thyroglobulin test(follicular cancer (သို့) papillary cancer များအတွက် အသုံးပြုသည်။)
သွေးထဲရှိ ဖော့စဖရပ် ပမာဏများအားတိုင်းတာခြင်း
Thyroid Cancer (သိုင်းရွိုက်ကင်ဆာ ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ဖြစ်ပွားသော ရောဂါ အမျိုးအစားနှင့် အဆင့်၊မိမိ၏ယေဘုယျကျန်းမာရေးနှင့် မိမိကြိုက်နှစ်သက်သောကုသမှုများတွင် ကုသမှုသည် မူတည်သည်။ အများစုသော သိုင်းရွိုက်ကင်ဆာများသည် ကုသပျောက်ကင်းတတ်သည်။
သိုင်းရွိုက်အကျိတ်အား တခုလုံး(သို့) အကျိတ်သားအများစုကို ဖြတ်တောက်ကုသခြင်း၊
သိုင်းရွိုက်အား ဖြတ်တောက်ခွဲစိတ်ပြီးသောအခါ သိုင်းရွက်ဟော်မုန်းဆေးဖြစ်သော လီဗိုသိုင်ရော်ဇင်းအား တစ်သက်လုံးသောက်သုံးရတတ်သည်။ သောက်သုံးရမည့် သင့်တော်သော သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းဆေးပမာဏအား သိရှိသည်အထိ သွေးထဲရှိ သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းပမာဏများအား လအနည်းငယ်ကြာတိုင်းစစ်ဆေးခြင်းများပြုလုပ်ရတတ်သည်။
ထို့နောက် နှစ်စဉ်သွေးစစ်ဆေးမှုများလည်း ပြုလုပ်ရတတ်သည်။
ရေဒီယိုသတ္တိကြွ အိုင်အိုဒင်းများဖြင့် ကုသခြင်း
ရေဒီယိုသတ္တိကြွ အိုင်အိုဒင်းများကို ပမာဏအများပြားပေး၍ ကုသသည်။ သိုင်းရွိုက်အကျိတ်အား ဖြတ်တောက်ကုသပြီး ကျန်ရှိသောသိုင်းရွိုက်တစ်ရှူးများအားဖျက်ဆီးကုသသည့်
အချိန်တွင်ဖြစ်စေ၊ခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်စဉ်အတွင်း မဖြတ်ထုတ်လိုက်ရသော မိုက်ခရိုစကုပ်ဖြင့်သာမြင်ရနိုင်သည့် သိုင်းရွိုက်တစ်ရှူးများအား ဖျက်စီးကုသသည့်အချိန်တွင်ဖြစ်စေ အသုံးပြုတတ်သည်။
အကျိတ်၏အပြင်ပိုင်းရှိနေရာများအား စွမ်းအားပြင်းသည့်ဓါတ်ရောင်ခြည်တန်းများကို တိတိကျကျ ထိတွေ့မှုပေးနိုင်သော စက်တခုဖြင့် ကုသလေ့ရှိသည်။
သိုင်းရွိုက်ကင်ဆာတွင် အများအားဖြင့် အသုံးပြုလေ့မရှိသော်လည်း
အခြားသောကုသနည်းများဖြင့် မကောင်းမွန်လာသော လူနာများအား သက်သာပျောက်ကင်းစေခြင်းငှာ ဖြစ်နိုင်သည်။
ဆိုလိုသည်မှာ ကင်ဆာဆဲလ်များအတွင်းရှိ သက်ဆိုင်ရာနေရာများနှင့် ပစ္စည်းများအား တိတိကျကျထိရောက်စေသော ဆေးများအသုံးပြုကာ ကုသခြင်းဖြစ်သည်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက သိုင်းရွိုက်ကင်ဆာ ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့် သိုင်းရွိုက်ကင်ဆာ ကိုကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတဲ့နေရာတွေမှာ အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
သိုင်းရွိုက်ကင်ဆာအများစုမှာ ကာကွယ်၍မရနိုင်ပါ။ ရှားပါးသော သိုင်းရွိုက်ကင်ဆာအမျိုးအစားတခုဖြစ်သည့် medullary thyroid cancer (MTC) သည် မိဘများမှ လက်ဆင့်ကမ်းမျိုးရိုးလိုက်တတ်သော ရောဂါဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မျိုးရိုးဗီဇစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ပြီး ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကို တွက်ချက်ကာသဘောပေါက်ထားသင့်သည်။ အကယ်၍ဖြစ်ပွား
နိုင်ချေများနေပါက သိုင်းရွိုက်အကျိတ်အား ဖြတ်ထုတ်၍ နောက်ပိုင်း ဘဝတွင် ဖြစ်ပွားနိုင်ချေများကို လျှော့ ချကာကွယ်နိုင်သည်။ ဓါတ်ပေါင်းဖိုနားရှိ သူများသည်လည်း ကြိုတင်ကာကွယ်မှုအချို့ယူထားသင့်သည်။
Thyroid cancer topic overview http://www.webmd.com/cancer/tc/thyroid-cancer-topic-overview#2. Accessed February 18, 2017
Thyroid cancer http://www.healthline.com/health/thyroid-cancer#Prevention8. Accessed February 18, 2017
Thyroid cancer http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/thyroid-cancer/basics/prevention/con-20043551. Accessed February 18, 2017